Iyo Ibex 35 Dividend, indekisi isingazivikanwe muSpain | Ehupfumi Zvemari
Iyo Ibex 35 Dividend, indekisi isingazivikanwe muSpain
Hapana mubvunzo kuti kuSpain kune zvimwe zvinongedzo zvinopfuura kunongedzera kwesarudzo dzeSpanish equities, iyo Ibex 35. Zvikurukuru, iyo Ibex 35 Zvikamu, kunova uko zvakachengetedzwa zvinogovera bhonasi iyi kune vanogovana zvakanyorwa uye izvo zvakabatanidzwa mukati iyo inosarudzika yenyika dzakabatana. Iyo indekisi ye zvisikwa zvichangobva kuitika, sezvo yakagadziriswa nekutanga kwezana rino remakore uye inogona kuve inonakidza kwazvo kuendesa mashandiro evashambadzi vadiki nepakati nekuda kwehunhu hwakakosha hunouya pamwechete mune zvavo zvemari zvinhu.
Nekuvhurwa kwayo, varimi vane nzira nyowani yekugara vachiteedzera kushanduka kwehunhu hunopa mibairo kuvarimi. Seye sosi yekunongedzera kunongedza nzira dzako mudanho rekudyara. Ose ari maviri kubva kune ega maonero ekuona ezvichengetedzo pachavo uye kana akabatanidzwa mune yekudyara portfolio yemari yekudyara. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yemakisi zvishoma kuzivikanwa nevashambadzi vadiki nepakati. Mune akawanda mamiriro, pasina kuve nechero chirevo kuhupenyu hwako.
Iyo Ibex 35 Kugovaniswa chiratidzo chakakosha kwazvo kune vanoita mari vanosanganisira kusiyanisa kwemitengo yezvivimbiso. Kunge purofiti inogadzirwa nekuparadzaniswa kwezvikwereti zvinopihwa nekuchengetedzwa gore rega rega nenzira inokodzera uye yakavimbiswa. Nezvido zvinokatyamadza pakati pe3% ne8% uye kuti inogadzirwa nenzira yakasarudzika yekuumba portfolio yemari yakatarwa mukati meiyo kusiana. Zvakanaka pamusoro pebhenefiti inopihwa panguva ino nemhando dzakasiyana dzemabhengi. Pakati pavo, yakatarwa-nguva dhipoziti, maakaundi-emari maakaundi kana zvimwe zvirongwa zvekuchengetedza izvo zvinongopa chete kufarira kwe1%.
1 Ibex 35 Zvikamu: zvinoshanda sei?
2 Nyowani sosi yekuongorora
3 Kakawanda kwemhosva
4 Hwaro hwemari zhinji dzinowirirana
5 Zvakanakira iyi stock index
6 Kusarudzwa kwemvumo
Ibex 35 Zvikamu: zvinoshanda sei?
Iyi nyowani yebenchmark index mumakambani emunyika inoratidzwa nenyaya yekuti iine zvinotevera zvakafanana zvikamu, kuverenga uye kugadzirisa nzira kupfuura iyo inoreva kusarudzwa kwenyika. Iine misiyano chete iyo inongobatanidza chete kuchengetedzeka kunogovera zvikamu pakati pevachagovana navo. Neiyi nzira, inoumbwa seyakatsva chiteshi iyo inowanikwa kune vese varairidzi uye kubva kwavanogona kuita mari yavo ine yakanyatso tsanangurwa paramende uye kuti neimwe nzira yakanangana neya investor chimiro iyo inoda kudyara kuchengetedzeka pamusoro peimwe hunyanzvi kufunga.
Inosanganisira makambani akadai seEndesa, BBVA, Banco Santander, ACS, Iberdrola kana Mediaset yekupa chete mashoma maenzaniso. Nemisiyano inosiyana zvakanyanya zvichienderana nemutemo wekubhadhara wemakambani aya. Mupiro mukuru unopihwa neiyi yakakosha stock index ndeyekuti muzvinashawo anozove neindekisi kwavari akaronga zvese kukosha izvo zvakanyorwa pane yakasarudzika yenyika. Kwete kufanana kusvika makore mashoma apfuura pakanga pasina chirevo chemakambani aigovera zvikamu.
Nyowani sosi yekuongorora
Semhedzisiro yekuonekwa kweiyi stock index yeSpanish equities, zvinogoneka ku ongorora zviri nyore iyo purofiti inopihwa nemakambani kuburikidza nemubhadharo uyu. Zvakare nekushanduka kwezvese kuchengetedzeka zvinosangana neaya maitiro uye, pakupedzisira, zvimwe zvikwereti zvavanopa mubairo kune avo vagovana navo. Ipfupi, ipfupi, modhi nyowani yekutarisa shanduko yezvese kuchengetedzeka zvinogovera zvikwereti pasina kuenda kune yega yega. Sezvakaitika pane dzimwe nguva nevatengesi vadiki nepakati.
Asi pane izvo, vane zvimwe zvavasingakwanise kuita senge kusabvisa imwe nhanho yezvivigiro iyo inobhadharawo mibairo nguva dzose, asi haina kuisirwa muIbex 35. Semuenzaniso, mumakambani akaita seLogista, Atresmedia, OHL, Ebro NH Hoteles . Kune rimwe divi, kune zvimwewo zvinhu zvinobatana neiyi indekisi yemusika wemasheya kumakambani anopa migove, asi mune discontinuous uye isina kujairika chimiro. Uye izvo hazvisipo muIbex 35 Dividend. Hazvishamisi kuti izvo chete zvinodiwa zviviri, kune rumwe rutivi, govera mugove sezvazviri zvine musoro. Uye kune rimwe divi, zviri zveyakasarudzika indekisi yemari yenyika.
Mhedzisiro ine mwedzi waZvita naChikunguru yavo yepamusoro yekugashirwa nevashambadzi vadiki nepakati. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa, kune rimwe divi, kuti mazhinji emakambani aya anoita anosvika mana ekubhadhara pagore gore rega, rimwe rekota yega yega. Kunyangwe zvakare nguva dzekubhadhara dzinogona kuve pagore kana kaviri, zvinoenderana nemutemo wakagadzirwa neimwe yekambani dzakanyorwa. Icho zvakare chirevo sosi yekuona iko chaiko shanduko yezvifungo izvi zvine chinangwa chekuita kuchengetedza kunobatsira. Nenzira chaiyo uye usinga fungire kumwe kukoshesa mumusika wemasheya.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti kuunganidza zvikamu zvinokodzera kutora chinzvimbo mune aya maitiro mazuva mana kana mashanu pamberi. Kwete sepakutanga, mune izvo zvichave zvakakwana kuti uzarure zvinzvimbo zuva rakatangira kubhadhara kwacho. Nepo pane zvinopesana, kubvisa zvinzvimbo kunogona kuitwa zuva rimwe chete mushure mekumisikidza iyi kuchaja paakaundi. Zano iro pasina mubvunzo vazhinji vadiki nevapakati varimimari vanotendeukira kwavari kuti vazvipe ivo pachavo neyakagadzika muaccount yavo account. Kunze kwekumwe kufunga kwakakosha.
Hwaro hwemari zhinji dzinowirirana
Iyo Ibex 35 Dividend inogona kunge iine mamwe mashandisirwo muzvikwereti zvakagadzirwa nevashandisi. Imwe yeakajairika ndeyekuti inowanzo sanganisa chikamu chakanaka che mari yehomwe yemari zvichibva pamari. Sezvimwe nezvimwe indices yekondinendi yekare ine hunhu hwakafanana. Saka kuti nenzira iyi, haufanire kubvumirana nekuchengetedzeka wega. Kune rimwe divi, ichagadzira kuti kudyara kwacho kwakanyatsosiyana-siyana, kunyangwe paine zvimwe zvinhu zvemari kubva pamari yakamisikidzwa kana kubva kune dzimwe nzira dzekudyara (real estate management, mbishi zvigadzirwa, simbi dzinokosha, nezvimwewo)
Parizvino patova nemari dzinoverengeka dzekudyara dzinoenderana neIbex 35 Dividend. Zvichida zvishoma kana zvakabatana uye izvo zvinogona kuchinjiswa kune chero mhando zano rehutariri hweanowanikwa capital. Uye zvakare, uye nenzira yekuda kuziva, usakanganwa kuti kuburikidza neiyi mari yekudyara iwe unogona kuve unokwanisa gashira mugove wenguva dzose mukati memakore ese aunogara mune ichi chemari chigadzirwa. Nenzira iyi, iwe unenge uine mari yakatarwa uye yakavimbiswa mumakore ese emari uye zvisinei nekushanduka kwekuchengetedzeka kwako mumisika yemari.
Zvakanakira iyi stock index
Iwo mabhenefiti ayo iyo yenyika equity index inogona kukuunzira iwe yakawanda, sezvaunozoona pazasi. Chimwe chezvinhu zvinobatika ndechekuti iwe uchave nemubairo kunyangwe ukarasikirwa nemari mukudyara. Kune rimwe divi, iri chikamu uko makambani akanyanya kukosha akanyorwa munyika akabatanidzwa uye aine huwandu hwakanyanya hwekutaurirana. Mune mamwe mazwi, ivo vanomira kunze kwesimba ravo rakakura zvine chekuita neyakaomeswa yakapihwa nezvikamu zvavo.
Imwe yemipiro yake yakakosha ndeye iyo ine chekuita neshoko rake remari, sezvo iwo ari iwo akapihwa neakanakisa magariro mune manejimendi ake. Kwete pasina, hapana fungidziro kana mitsara yebhizimisi isingasviki. Iwo makambani akasimbiswa zvakanaka muhutungamiriri hwavo uye nekudaro njodzi dzawo dzakaderera zvakanyanya pane mamwe ese. Kupa chengetedzo huru kune vanoita mari.
Imwe yemhando dzekudyara dzakabuda mumakore achangopfuura ndidzo dzinongedzo sosi ndechimwe chigadzirwa chemari inoshanduka, mvumo. Iyi fomati yakasarudzika inosimbisa zano rayo pakusanganisa mashandiro, zvekuti kana mukati mehupenyu hwayo mutengo weaseti unobata kana kupfuudza chero nguva mamwe matanho akafanotemerwa, ezasi kana epamusoro, kukura kunotanga kufanoita. Izvo zvakati wandei kuomarara, sezvo kune rimwe divi zvine musoro kufunga mune yechigadzirwa chekudyara cheaya maitiro. Uye izvo zvinoda kudzidza kukuru kuti ushande nayo nenzira inoshanda zvakanyanya uye pamusoro pezvose uine vimbiso huru yekubudirira.
Icho chigadzirwa chakakwenenzverwa chinotengeswa pamusika wemasheya wechiSpanish zvinoenderana nemitemo yekushandisa yechikamu chekutengesa chemvumo, zvitifiketi nezvimwe zvigadzirwa zvine maitiro akafanana. Panguva yekubvumidzwa kwezvigadzirwa izvi, chipingaidzo chepasi kana chepamusoro chinogadzirisa kukanganisika kwekutaurirana kwekirasi ino yezvigadzirwa zvemari nekuda kwekunonoka kupera uye kubviswa kwavo chaiko pamusika padyo nechikamu chekutengesa. Izvo zvakagadzirirwa kune yakanyanya kusarudzika nhoroondo yevatengesi uko chishuwo chekuwana kudzoka kwakanyanya kunokunda mashandiro anoitwa mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo Ibex 35 Dividend, indekisi isingazivikanwe muSpain
Mazano ekugadzira mari inobatsira yekudyara